DOWNLOAD Airbus A380-800 VC Air France FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 258 471
Munyori: Project Airbus, repack uye 2D Panel kubudikidza Rikoooo, VC kururamiswa rakafuridzirwa Facked http://www.pafs.wf
Download Kune FSX-SP2 & FSX-Steam & P3D v1. * v2 v3 v4 kuti iongorwe # Port-Over hapana P3Dv4 inoshandiswa #3D Virtual Cockpit
Updated musi 05 / 05 / 2013: unocherekedza VC netsikidzi uye achiwedzera 2D Panel akasikwa Rikoooo.
Airbus A380 Air France mavara, zviri rongedza zvakakwana! Zvinosanganisira rakapotsa Cockpit pahwaro chaihwo A380 uye tsika ruzha, rongedza uyu unocherekedza netsikidzi vane opaque girazi (windshield) uye redhiyo. Rokutanga kabhini kirasi (uriri wechipiri) riri modeled. Cherechedza kuti windshield negirazi kuva opaque kana uri mvura (chete FSX SP2 uye P3D). In 2012 Air France vapiwe masere ndege vakadaro 538 zvigaro mumwe vakapakata injini "Alliance GP 7200."
The Airbus A380 munhu wehurumende chaizvo airliner widebody-refu dhonza mana-injini kaviri-decker rakabudiswa Airbus, ane EADS chikamu. zvinhu zvayo dzinovakwa kunyanya France, Germany, Spain, uye United Kingdom, chokupedzisira ungano zvinoitwa muToulouse, France.
The A380 Chirongwa, zvachose kukura mari mabhiriyoni 12 euros, kwakatangwa nemakore 1990 sezvo Airbus A3XX. Ndege yokutanga kwakaitika musi 27 April 2005 kuToulouse Airport uye yokutanga basa vezvokutengeserana yakaitwa October 25, 2007 kubudikidza Singapore Airlines pakati Singapore uye Sydney.
The A380 ndechokuti, muna 2012, chikuru yevagari ndege mu mutakurwi basa, uye yechitatu pakukura ndege munhoroondo avhiyesheni, mushure Hughes H-4 Hercules uye Antonov An-225. The A380 wacho yokumusoro uriri kunopfuurira pamwe rose kureba fuselage, achipa kabhini nzvimbo 50% kupfuura ayo zvakananga mukwikwidzi, iye Boeing 747-400. (Wikipedia)
New 2D Panel akasikwa Rikoooo + kugadziriswa akachinja VC nokuda FSX uye Prepar3D
Pamwe hud the muna VC uye 2D Panel, usiku textures, emadziro mifananidzo uye dzimwe tsika gauges ...
The 2D mapuranga ari pre-yakaiswa uye akabatanidza rongedza ichi. Zvisinei, unogona download yoga: Download 2D Panel (kugadziriswa VC) - 8MB pa_a380_2dpanel_rik_fsx.zip
Airbus A380-800 VC Air France FSX & P3D Download
Downloads: 58 523
Downloads: 58 138
Downloads: 71 915
Airbus A330 Multi-Livery pasuru FSX & P3D
Downloads: 53 182
Downloads: 29 734
Downloads: 42 767
Downloads: 4 857
Downloads: 44 757